April 13, 2018 – TajaNepal
जस नपाएपछि खल्तिमा राजीनामा
मधेशमा सिकेको अर्को दल
काँग्रेसमा जुट्यो सहमति
तल्लो पेट किन दुख्छ ?
दुग्ध व्यवसायमा विदेशी चलखेल
काँग्रेसमा शक्ति हत्याउने खेल
‘लालुमै’लाई दर्शकको साथ
गरीबको भलो कहाँ हुन्छ सरकार !
लगानी सम्मेलनको केही छैन तयारी
पार्टी गुटबन्दीमा सरकार कमिसनमा
आर्थिकFebruary 13, 2019
काठमाडौँ । गुटबन्दीले थलिएको पार्टी र अराजकताले क्षय गरेको सङ्गठनको शक्ति हुँदैन । विघटित एमालेमा जस्तो शिरदेखि पैतालासम्म फैलिएको गुटबन्दीकै बीचमा त्यस्तै प्रकृतिको माओवादीसँग पार्टी एकता भयो । चुनावी मोर्चामा पनि त्यही गुटबन्दीको बढोत्तरी हुन्थ्यो…
रामचन्द्रको सपना दुवै अधुरा
EnglishFebruary 13, 2019
काठमाडौँ । उदार भावनाको खडेरी लागेपछि नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आफ्नै कारण चेपुवामा परे । उनको रहर पार्टी सभापति बन्ने र देशको प्रधानमन्त्री हुने थियो । तर यी दुवै पदमा उनी आउन सक्ने…
आर्थिक रूपमा खस्कियो त देश !
UncategorizedApril 13, 2018
कहाँ गए वामपन्थी अर्थशास्त्रीहरू ? काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुनुपर्ने तथ्याङ्कशास्त्रीलाई एकाएक अर्थमन्त्री बनाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका योजनाहरू बकमफुसे हुने त होइनन् ? अहिले देखिएको सेयर बजारको अवस्थाले शङ्का उब्जाएको छ । नेपालको…
जस नपाएपछि खल्तिमा राजीनामा March 19, 2019
मधेशमा सिकेको अर्को दल March 19, 2019
काँग्रेसमा जुट्यो सहमति March 19, 2019